Vaovao - Ahoana no fiasan'ny jiro UV
Alohan'ny hamaliana ity fanontaniana ity dia avelao jerena izay UV Lighting.
Voalohany, andao jerena ny hevitry ny UV. UV, na ultraviolet, na ultraviolet, dia onja elektromagnetika misy halavan'ny halavany eo anelanelan'ny 10nm sy 400nm. UV an'ny tarika onja samihafa dia azo zaraina ho UVA, UVB ary UVC.
UVA: lava ny halavan'ny halavany, eo anelanelan'ny 320-400nm, izay afaka miditra amin'ny rahona sy vera ao amin'ny efitrano sy ny fiara, ary afaka miditra amin'ny dermis amin'ny hoditra, ka miteraka sunburn. UVA dia azo zaraina ho uva-2 (320-340nm) sy UVA-1 (340-400nm).
UVB: ny halavan'ny onja dia eo afovoany, eo anelanelan'ny 280-320nm. Hitroka ao anaty sosona ozonina izy io, ka miteraka sun mena sy hoditra mena, fivontosana, hafanana ary fanaintainana. Amin'ny tranga matotra dia hitranga ny fivontosana na ny fikolokoloana.
UVC: ny halavany dia eo anelanelan'ny 100-280nm, fa noho ny halavan'ny halavan'ny 200nm dia vovoka ultraviolet, azon'ny rivotra entina izy, noho izany ny halavan'ny ondran'ny UVC izay afaka miampita ny habakabaka dia eo anelanelan'ny 200-280nm, ny fohy kokoa ary ny tena mampidi-doza ny ny halavan'ny halavany dia, saingy satria azon'ny sakan'ny ozone sakanana izy io dia kely ihany no hahatratra ny velaran'ny baolina eto an-tany.
Ahoana ny fiasan'ny UVC amin'ny sterilization
UV dia afaka manimba ny firafitry ny molekiola ao amin'ny ADN (Bacilli) na RNA (Virosy) mikraoba, ary mahatonga ny bakteria ho faty na tsy afaka hamokatra, mba hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization.
Ka ny valiny dia Eny.
UVC Lighting dia afaka mamono an'i Covid-19
Jiro UVC Mercury ary jiro UVC LED
Raha ny tantara no jerena dia ny jiro merkiora no safidy tokana amin'ny fanamorana ny UV. Na izany aza, ny Fifanarahana Minamata momba ny merkiora dia nanomboka nanan-kery ho an'i Shina nanomboka ny 16 Aogositra 2017. Ny Fifanarahana dia mitaky ny famokarana, ny fanafarana ary ny fanondranana ny merkiorazy izay misy vokatra voalaza ao amin'ny Fifanarahana dia voarara hatramin'ny 1 Janoary 2021, ary ny jiro merkiora ho voatanisa eto. Noho izany, tsy dia misy fotoana firy amin'ny jiro mercury, ary ny UVC LED no hany safidy azo antoka.